MARKA 14.1-11	F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
MARKA 14.1-11	F. 2
JESOA MIOMANA HO AMIN’NY FAHAFATESANY
Fankahalana miafina ambadiky ny fombafombam-pivavahana. Fety lehibe sy masina ho an’ny zanak’Isiraely ny Paska. Sarotiny fatratra ireo mpisorona sy mpanora-dalàna mba tsy hisy korontana mandritra izany. Ambadik’izany anefa dia manana fo ratsy sy maloto izy ireo : mikasa hamono olona rizareo. Nasain’Andriamanitra tandremana ny Paska, nefa hoy koa Izy: “Aza mamono olona”.
Tahaka ny fanarahana lalàna, ny fombafomba na ara-pivavahana aza, dia tsy manan-kery honova ny faharatsiam- piainana. Fa “raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy”
Fitiavana an’i Jesoa. Maria, anabavin’i Lazarosy ilay vehivavy eto. Tokony ho karaman’olona miasa herintaona no tombam-bidin’io menaka manitra io fahizany. Maneho fitiavana lehibe ny nanolorany izany ho an’ny Tompo, ary ny fanosorana amin’ny loha dia maneho ny fanekeny an’i Jesoa ho Mpanjaka. Fahatakarana ara-panahy lalina sy finoana lehibe no asehon’i Maria : ho faty sy halevina Jesoa, fa ho Mpanjaka koa Izy, izany hoe ho velona. Izany no filazantsara izay torina amin’izao tontolo izao. Tsy mba fandanianiam- poana izay rehetra atolotra ho an’ny Tompo: vola aman-karena, fahaizana, talenta, fotoana, asa.
Famporisihana : Ataovy ambony indrindra eo amin’ny fiainanao Jesoa ary tolory izay tsara indrindra avy aminao. Izany no anehoy ny fitiavanao azy.
Fivadiham-pitokisana. Jodasy no anisan’ny tezitra teto. Izy no nitahiry ny volan’ny mpianatra ary nangalatra tamin’izany. Na dia anisan’ny roambinifolo lahy aza izy, dia tsy nahatakatra ny zava-panahy intsony, na dia efa nazavain’i Jesoa aza izany. Mameno azy mihoatra noho ny fitiavana an’i Jesoa ny fitiavam-bola aman-karena. Tonga namadika an’i Jesoa izy noho izany.
Tandremo : Ny ota kely tsy ibebahana dia mety mitondra hatramin’ny fihemorana.